जीवनको अन्तिम समय बिताउन कुन देश छ राम्रो ?
काठमाडौँ । संसारमा, जीवनको गुणस्तर मात्र होइन, मृत्युको गुणस्तर पनि महत्त्वपूर्ण छ । राम्रो जीवन बिताएपछि हाम्रो सास पनि सहजै बन्द होस् भन्ने आशा हामी सबैलाई छ, तर उच्च आय भएका
काठमाडौँ । कोही दुधको चिया पिउन मन पराउँछन् भने कोही स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर ग्रीन टी पिउन रुचाउँछन् । ग्रीन टी प्रशोधन नगरिएको हुनाले स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ । यसले
अभिभावकको चिन्ता: बालबालिकाको मोबाइलको लत कसरी छुटाउने ?
काठमाडौँ । आजकल प्रायः हरेक अभिभावक बालबालिकाको मोबाइलको लतबाट चिन्तित छन् । मोबाइल फोनले बालबालिकाको आँखा मात्र बिगारिरहेको छैन, उनीहरु मोटोपनको सिकार हुनुका साथै जिद्दी, रिसाउने र उनीहरुको सिर्जनशीलता पनि